The Gardener: ကုန်လွန်ရက်စွဲများ
gOOD FRiDAy ကတော့ အတော်လေး gOOD သွားတယ်။ tHE MENTALIST SEASON4၁၇ ကားကို ဆက်တိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ထမင်းနှစ်ခါထစားတယ်။ ရေတစ်ခါထချိုးတယ်။ tv ကို ကသိုဏ်းရှူသလို ကြည့်ပစ်လိုက်တယ်။ Season3တုန်းက သတ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ထင်ရတဲ့ Serial Killer RED JOHN က မသေသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ subcribe လုပ်ရင် ၂၉ SGD လောက်ကျမယ်။ အလကားကြည့်ရတာ mio TV ကျေးဇူးပဲ။ ဇနီးသည်က စုံထောက်ကားမကြိုက်ပုံပေါ်တယ်။ လာမကြည့်ဘူး။ TV ကို ဒီလိုကြာကြာကြည့်တာကိုလည်း အားပေးပုံမပေါ်ဘူး။ ၁၇ ကားပြီးတော့ ခေါင်းတွေအတော်မူးနေတာတွေ့ရတယ်။
TV အကြည့်လွန်ပြီးသေသွားတဲ့သူတွေ ကမ္ဘာမှာရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီစာရင်းထဲကိုတော့မပါချင်သေးဘူး။ အခုတလော ရုပ်ရှင်ကို ၀ါသနာပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ အသက်သုံးဆယ်ရောက်လာတော့ အသက်လည်း ထိပ်စီးပြောင်းသွားသလို ၀ါသနာလည်း ထိပ်စီးပြောင်းသွားပုံရတယ်။
Lorax သွားကြည့်ပြီးတော့ Wrath of the Titans ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ရှေ့လမှာ Madagascar3တင်ရင်လည်း သွားကြည့်ဦးမယ်စိတ်ကူးတယ်။ စာရေးတာတော့ တော်တော်လေးလျော့သွားတာသတိထားမိတယ်။ အရင်ကလို ပုံမှန် ရေးဖြစ်တာတော်တော်လေးနည်းသွားတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သတိထားမိတယ်။ အသက်ကြီးလာလို့ဖြစ်မယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ လူက ပျင်းသထက်ပျင်းလာပုံပေါ်တယ်။ ရုပ်ရှင် REVIEW လေးတွေရေးလက်စတွေရှိတယ်။ မတင်ဖြစ်ဘူး။ ဘယ်ဟာမှ အပြီးမသတ်နိုင်သေးဘူး။ LEGEND OF BAGGER VANCE ရေးနေတယ်။ ပြီးမယ့်ပုံတော့မပေါ်သေးဘူး။
တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ကုလားကားတစ်ကားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပြာရေးနဲ့ မိုဟမ်တဲ့။ ရယ်ရတယ်။ အင်္ဂလိပ် အက်ရှင်တွေမကြည့်ချင်တဲ့ ဇနီးသည်ကြောင့်ကြည့်ဖြစ်တာလို့ဆိုနိုင်တယ်။ ကုလားအကတွေကလည်း အရင်လို ဗိုက်ကလေးကော့လန်ကော့လန်လေးလုပ်ပြီး ပြေးဟယ်လွှားဟယ် လဲဟယ်ထူဟယ်လောက်မဟုတ်တော့ဘူး။ အနောက်တိုင်းဆန်လာတယ်။ အရင်ကတည်းက အက၀ါသနာပါပြီးသားဆိုတော့ အနောက်တိုင်းအကလည်းသင်ရလွယ်ပုံရတယ်။
ပြာရေးက မျက်မမြင်၊ မိုဟမ်က နားမကြား။ မြန်မာကားတွေနဲ့ဆင်တယ်။ ကုလားကားကတော့ ရိုက်တာပိုကောင်းတယ်။ လူစုံတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ မြန်မာပရိတ်သတ်အတွက် ဆီလျော်တယ်ထင်မိတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ခိုင်တယ်ပြောရမယ်။ ၂ နာရီခွဲကြာတယ်။ ကနေဆိုနေတာတွေ ကျော်ပစ်လိုက်ရင် ဇာတ်လမ်းက ၁ နာရီလောက်တော့ရှိတယ်။
ဇာတ်လမ်းကို နှစ်ဆင့်လုပ်ထားတယ်။ tricks လေးနဲ့ပေါ့။ မြန်မာကားတွေလို တွေ့တွေ့ချင်းမကြိုက်ဘူး။ အငြင်းခံရတာလည်းရှိတယ်။ ကုလားပြည်မှာချည်းမရိုက်ဘူး။ ထိုင်းကိုတစ်ဝက်သွားရိုက်တယ်။ Don Tony ကြီးသေပြီထင်ရာကနေ ပြန်ရှင်လာတာကလည်း အလှည့်အပြောင်းလေးတစ်ခုပဲ။
ပျော်စရာဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်တယ်။ ကုလားကားကြိုက်တဲ့ပရိတ်သတ်အတွက်တော့ ကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးတစ်ကားပဲ။ မြန်မာကားတွေ ဒီလို ဇာတ်လမ်းမျိုးလေး ခိုးပြီးရိုက်လိုက်ရင် ငွေဝင်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားဖြစ်နိုင်တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံသွားတဲ့အခန်းပါထည့်ရိုက်လိုက်ရင် ဆန်းသစ်သွားမယ်။ ANNA ဇာတ်ကားမှာ မြန်မာတွေကို လူဆိုးတွေအဖြစ်ထည့်ရိုက်ထားတာကို လက်စားချေရာလည်းရောက်နိုင်တယ်။
မင်းသမီးနှစ်ယောက်မှာ အငယ်မလေးက အနောက်တိုင်းသူနဲ့တူတယ်။ မဆိုးဘူး။ အကြီးကတော့ မျက်လုံးအမည်းဆိုးထားတော့ ဂျားကစ်ရုပ်ပိုပေါက်တယ်။ အကုန်အကျမများဘဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖန်တီးနိုင်တာတွေကြောင့်လဲ bollywood ဟာ အောင်မြင်တာပဲ။
မြန်မာအလှမယ်တွေကတော့ အင်္ဂလိပ်လို နကန်းတစ်လုံးမှနားမလည်တာကိုတွေ့ရတယ်။ အင်တာနက်ရှင်းနယ်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးထင်တာပဲ။ တင်မိုးလွင်မေးတာကို ဖြေတာ ခဏ၀င်ကြည့်လိုက်တာစိတ်လေသွားတယ်။ Global Warming ကိုကာကွယ်ဖို့ a. သစ်ပင်စိုက်ရမယ်။ b. သစ်ပင်ခုတ်ရမယ်။ c. သစ်ပင်တွေကို ချစ်ရမယ်။ d. None of these ကိုdလို့ရွေးတာတွေ့ရတယ်။ တော်တော်ပညာသားပါတဲ့အဖြေလို့တွေးမိတယ်။ တင်မိုးလွင်က generally မေးတာကို ပညာသားပါပါနဲ့ဖြေသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ Antarctica မှာ သစ်ပင်သွားစိုက်ရင် Global Warming ပိုဆိုးသွားစရာရှိတယ်ဆိုတာကို သူမလေး သိနေပုံပဲ။ အမှန်ကတော့ မဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်လိုကို နားမလည်တာ။ တစ်ယောက်က အာဆီယံဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလည်း မသိရှာဘူး။ ရုပ်ကလေးတွေက သနားကမားလေးတွေဆိုတော့ အားလုံးကို မဖြေနိုင်လည်း အောင်မြင်စေချင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဗဟုသုတနဲ့ ရုပ်အဆင်းနဲ့ဟာ ဆက်စပ်စရာမလိုဘူးထင်မိတယ်။ စူပါမော်ဒယ်တစ်ယောက်ဟာ အနီရောင် ကော်ဇောပေါ်မှာ တင့်တယ်ကျက်သရေရှိနေရင်တော်ပြီလို့ထင်တယ်။ ဗဟုသုတဆိုတဲ့အရာကို တော်တော်လေးစိတ်ကုန်နေပြီ။ အခုခေတ်မှာ များများသိတာဟာ hard disk space ကိုချွေတာပြီး ဦးနှောက်ကို space ဖြုန်းတာပဲ။ အသုံးမ၀င်တော့ဘူး။
facebook ကတော့ မြန်မာပြည်ကနေ၀င်မရဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ တော်တော်လေးစိတ်လေတယ်။
စင်ကာပူမှာ အလုပ်လာရှာတဲ့ မြန်မာတွေလည်း သနားစရာကောင်းတယ်။ ၁၁၀၀ တည်းပေးတဲ့အလုပ်လည်းရှိတယ်။ တော်တော်လေးကို အံ့သြတယ်။ pass တွေ reject တော်တော်လေးဖြစ်တယ်။ ရတဲ့ဘွဲ့နဲ့ လျှောက်တဲ့အလုပ်နဲ့မကိုက်ရင်လည်း reject ဖြစ်တယ်။ အရင်ကလို appeal တင်ရင်လည်း မြန်မြန်မရဘူး။ တခါတလေ လေးပတ်အထိစောင့်ခိုင်းတာတွေဖြစ်တယ်။
စင်ကာပူမှာ သန့်ရှင်းရေးသမားတွေပျင်းကုန်ကြပြီ။ အမှိုက်တွေ၊ သစ်ရွက်တွေကို ရေမြောင်းထဲလှဲချလိုက်တာ အခုတလော ပိုတွေ့နေရတယ်။ အင်မတန်မှ အလွယ်လိုက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တခြားနေရာတွေတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော်နေတဲ့ဘက်မှာတော့ အမှိုက်သိမ်းကားလေးတွေမောင်းတဲ့သူတွေဟာ အရင်ဘ၀က ပြိုင်ကားမောင်းသူတွေဖြစ်တယ်။ အမြန်မောင်းတာ တင်လာတဲ့ ဆိုဖာခုံပြုတ်ကျတာလည်းတွေ့ရတယ်။ အမှိုက်အိတ်တွေ လမ်းပေါ်ကျနေတာလည်း မကြာမကြာတွေ့ရတယ်။
စင်ကာပူ SMU ရှေ့ချုံထဲမှာဆို မနေ့က ပစ်ထားတဲ့ ခွေးသေကောင် ဒီနေ့အနံ့တောင် ရနေပြီ။ ဒီနေ့လည်း လာမသိမ်းသေးဘူး။ အော့အော့တွေပါကလား။
နောက်နှစ်မှာ အလွန်ရှည်တဲ့ ပိတ်ရက်ရှိမယ်လို့ဒီနေ့ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ပိတ်ရက်မျှော်နေသူများ နောက်နှစ်မှာပျော်နိုင်ပါပြီ။